Understanding Basic Electrical Quantities (2) – NaingLinHan
Understanding Basic Electrical Quantities (2) — October 21, 2016
Understanding Basic Electrical Quantities (2)
October 21, 2016 November 2, 2016 /nainglinhan
အရင် Post ရဲ့ အဆက်ပါ။ စာမေးပွဲနဲ့ ကျောင်း Project တွေရှိနေတာနဲ့ Post တွေ ဆက်မတင်ဖြစ်ဘူး။ နောက်တော့ IOT (Internet of Things) အကြောင်းလေးတွေ လေ့လာမသလောက် တင်ပေးပါမယ်။ အခုတော့ အရင် Post လေးပြီးအောင် ရေးလိုက်ဦးမယ်။ အမှားပါတာရှိရင် ခွင့်လွှတ်ပါ။
လျှပ်စစ်စီးဖို့အတွက် ပတ်လမ်းပြည့် ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်လို ပြောရင်တော့ Completed Path (Closed Circuit) ဖြစ်ရမယ့်ပေါ့။ ကြားမှာ ဟနေတာ သို့မဟုတ် ပြတ်နေရင် လျှပ်စစ် မစီးနိုင်ပါဘူး။ အောက် က ပုံကို ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ သုံးနေတဲ့ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေက လျှပ်စစ် အခေါ်အဝေါ်အရ load လို့ ခေါ်ပါတယ်။ အောက်က ပုံမှာဆို မီးလုံး က Load ပေါ့။ Load ရှိရင် Resistance ရှိပါတယ်။ Load နဲ့ Resistance ရှုပ်မသွားပါနဲ့။ Load များရင် Current များများစီးပါမယ် Resistance များရင် Current နဲနဲ စီးပါမယ်။ ပုံပါ အတိုင်း မီးခလုတ် ဖွင့်ထားရင် completed path (close circuit) ဖြစ်ပြီး လျှပ်စစ်စီးပါမယ်။ မီးခလုတ်ပိတ်လိုက်ရင် ပတ်လမ်း တစ်ပတ် မပြည့်တော့ပဲ (incomplete path, open circuit) ဖြစ်ပြီး လျှပ်စစ်မစီးတော့ပါဘူး။
Fig.1 Current Flow ThroughaClosed Circuit
နောက် circuit တစ်ခုကတော့ short circuit ပါ။ လျှပ်စစ်ပတ်လမ်းမှာ resistance မရှိရင် ဒါမှမဟုတ် အရမ်းနည်းလွန်းတဲ့ အခါမျိူးမှာ short circuit ဖြစ်ပါတယ်။ Resistance မရှိတဲ့ အခါမှာ current က အတားအဆီးမရှိစီးပါတယ်။ Ohm law အရ Current ကို လိုချင်ရင် Voltage ကိုတည်ပြီး Resistance နဲ့ စားရပါတယ်။( I = V/R )။ Resistance မရှိရင် R=0 ဖြစ်ပြီး I တန်ဖိုး infinity ရပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် Current အမြောက်အများ စီးပြီး Fuse ခံထားရင် fuse ပျက်သွားပါမယ် breaker ခံထားရင် breaker ကျသွားပါမယ်။ Fuse တို့ breaker တို့လို အကာအကွယ် ပစ္စည်းတွေ မရှိရင်တော့ wire မီးလောင်ပြီး အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။
Fig.2 A short circuit bypasses the load and permits too much current to flow
နောက် short circuit နဲ့ မှားတက်တာက ground circuit ပါ။ Ground circuit ကလဲ short circuit လိုပဲ current အမြောက်အများ စီးသွားအောင် လုပ်ပါတယ်။ အောက် Fig.3 ကို ကြည့်ပါ။ Ungrounded (hot), Grounded(neutral) နဲ့ Grounded(safety) ဆိုပြီး ၃ ခုတွေ့မှာပါ။ Ungrounded(hot) နဲ့ Grounded(neutral) ကတော့ ရှင်းပါတယ်။ အပူကြိုးနဲ့ အအေးကြိုးပေါ့ မြန်မာလိုခေါ်ရင်။ Grounded(safety) က ground circuit အတွက်ပါ.. earth ချတယ်လို့ ပြောရမှာပေါ့။ ပစ္စည်းရဲ့ ကိုယ်ထည်နဲ့ earth ကို wire နဲ့ တိုက်ရိုက်ဆက်ထားပါတယ်။ ပစ္စည်းရဲ့ ကိုယ်ထည်မှာ အကြောင်း တစ်ခုခုကြောင့် လျှပ်စစ်စီးနေတဲ့အခါ သွားကိုင်မိရင် အန္တရာယ်ဖြစ်မှာ စိုးတဲ့အတွက် safety အနေနဲ့ထည့်ထားတာပါ။ ကိုယ်ထည်မှာ လျှပ်စစ်စီးနေတဲ့ အခါ earth wire ကနေ လျှပ်စစ်တိုက်ရိုက် စီးသွားပါတယ်။ ကမ္ဘာရဲ့ resistance က zero ဖြစ်တဲ့အတွက် current အမြောက်အများ ဖြတ်စီးသွားတဲ့အခါ breaker က over current ဖြစ်ပြီး breaker ကျသွားပါမယ် Fig.4 က အတိုင်းပါ။
Fig 3. Grounded 120V AC Circuit
Fig 4. Earth Fault Occur at the Grounded Circuit
Voltage ကို အကြမ်းပြောရရင် electron တွန်းအား (electromotive force – EMF) လို့ ဆိုရမှာပါ။ နောက်တစ်နည်းဆိုရရင် electron တွေကို wire ကြိုးတလျောက် ရွှေ့သွားအောင် လုပ်ပေးတဲ့ အားတစ်ခုပေါ့။ 1V ကို ဒီလို အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ပါတယ် မြန်မာလို ဘာသာပြန်ရင် ရှုပ်သွားမှာ စိုးလို့ အင်္ဂလိပ်လိုပဲပြန်ရေးလိုက်ပါတယ်။ A volt is the amount of potential necessary to cause one coulomb to produce one joule of work. မှတ်ထားရမှာက voltage က မစီးပါဘူး။ မြင်သာအောင် ပြောရရင် voltage က ရေပိုက်ထဲက ရေဖိအားလိုပါပဲ။ ရေဖိအားကြောင့် ရေက စီးတာပါ ရေဖိအား က စီးတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလိုပဲ voltage ကြောင့် current စီးပါတယ် voltage က မစီးပါဘူး။ Voltage ကို တိုင်းတာဖို့ voltmeter ကို သုံးပြီး unit က V ပါ။
Fig.5 Voltage in an electrical circuit can be compared to pressure inawater system
Categories: ElectricalTags: Electrical
Understanding Basic Electrical Quantities (1)
Resistor အကြောင်း တစ်စေ့တစ်စောင်း
အကြောင်းအရာများကို ခွင့်ပြုချက်မရှိပဲ ကူးယူဖော်ပြခွင့်မပြု